Imveliso yeFXCC | I-Forex, ii-indices, iGold neSiliva Trading
Uluhlu lweemveliso zethu
Amashishini amakhulu, amancinci kunye neeNgxowa-mali zangaphandle ezivela kwi-0.0 pips.
Ukurhweba iindleko ezintsha zehlabathi: i-Bitcoin, i-Litecoin, i-Ethereum kwi-MT4.
Iintsimbi ezixabisekileyo ezifana neGold, iSiliva, iPlatinum kunye nePalladium.
I-Oil Crude Oil Brent Cash, eNtshona Texas kunye neGesi yeNdalo.
Indice zezorhwebo e-UK, e-US, eYurophu nase-Asia ngokusasazeka kwiindawo ze-0.5.